ShweMinThar: အစ်စလာမျဘာသာဝငျ မှတျစလငျမျတှဟော ဘာဖွဈလို့ သူတို့ဘာသာဝငျအခငျြးခငျြးရောငျးတဲ့ဆိုငျမှာပဲစားကွတာလဲ ??
(ကိုးကှယျရာဘာသာကှဲပွားတိုငျး ရနျသူမဟုတျတဲ့ လူ့လောကကွီးမှာနထေိုငျကွတာမို့ ကိုယျလိုဗုဒ်ဓဘာသာဝငျမဟုတျတိုငျး အမွငျစောငျး စရာမလိုပါဘူး။ မကျြကနျးမြိုးခဈြ၊ မကျြကနျးဘာသာခဈြ မဖွဈစခေငျြပါ။ မိမိမိတျဆှေ သူငယျခငျြးမြားထဲမှာ အစ်စလာမျဘာသာဝငျတှပေါ လို့ရှိရငျ ကွားနကွေစကားလုံးလေးတဈခုရှိတယျ Halal အစားအသောကျတှကေိုသာ စားသောကျမှာပါ အခွားအစားအသောကျတှကေို ရှောငျကွဉျတယျဆိုတာပါပဲ။ ယခုနောကျပိုငျး Halal အစားအသောကျတှဟော ကနျြးမာရေးနဲ့ကိုကျညီတယျဆိုကာ အစ်စလာမျဘာသာဝငျ မဟုတျသူမြားလညျး စားသောကျလာကွပါတယျ။ သညျတော့ ဗဟုသုတအနနေဲ့သိထားရအောငျ Food Blooger ညီမလေး မရေဲ ရေးသားထားတာကိုပွနျဝငှေလိုကျတယျ။)
မရေဲ တို့ အစ်စလာမျဘာသာဝငျတှေ ဟာ အစားအသောကျ နဲ့ ပတျသတျလာရငျ halal ဟလာလျ ဖွဈမှစားကွတာကို အားလုံးသိပွီးသားဖွဈမှာပါ။
Halal ဟလာ ဆိုတာ ခှငျ့ပွုထားသောအရာမြား လို့ချေါပါတယျ။ ရှညျရှညျဝေးဝေးတှေ ရှငျးပွမနတေော့ပါဘူး။
မရေဲက အစားအသောကျ နဲ့ ပတျသတျပွီး အကွံညဏျပေးသူဆိုတော့ အစားအသောကျပိုငျးဆိုငျရာနဲ့ပဲ ရှငျးပွပါမယျ။
✅ လညျလှီးသား ဖွဈမှ စားခှငျ့ရှိပါတယျ
မရေဲတို့ ကိုးကှယျတဲ့အရှငျ ရဲ့ အမညျ ကို ရှတျဆိုပွီး အစ်စလာမျရဲ့ ထုံးတမျး နဲ့ အညီလညျလှီး သတျဖွတျ ထားတဲ့ သားကောငျဖွဈရပါမယျ။
ကွကျ ဘဲ ခို ငုံး ဆိတျ နှား ကုလားအုတျ ကြှဲ ဒါတှအေားလုံး ကို ဟာလာလုပျပွီးမှစားလို့ရပါတယျ။
( တဈခြို့ ဆိုရငျ ဝကျသား နဲ့ အရကျ မစားတာတဈခုပဲ သိကွတော့ ကွကျသားဆိုဒီအတိုငျးစားလို့ရတယျ ထငျကွပါတယျ တကယျ က လညျလှီး မှရတာ။ နောကျ ခှေး ကွောငျ သိနျးငှကျ မိခြောငျး ကွှကျ ဖား အငျးဆကျ စတာတှကေတော့ ဘာသာရေးအရ လုံးဝ စားလို့မရပါဘူး။ဘာသာရေးအရ စားပိုငျခှငျ့ရှိပမေဲ့ မြိုးတုနျးတော့မယျလို့ ကွညောထားရငျလဲ စားခှငျ့မရှိပါဘူး)
တဈခြို့ကွတော့လညျး လညျလှီးတယျ ဆိုတာ ဓါး နဲ့ တရုတျ သိုငျးကား ထဲ ကလို ဒုတျခနဲ့ လညျပငျး ကိုခုတျခလြိုကျတယျ ထငျကွတယျ
ထကျနအေောငျ သှေးထားတဲ့ ဓါး နဲ့ လညျပငျး က လပွှေနျ ၊သှေးပွနျကွော၊ သှေးလှတျကွော ကို ကွောရိုးမကွီးကို မထိပဲ လှီးလိုကျရတာဖွဈပါတယျ။
✅ ပါဝငျပစ်စညျးမြား halal ဟလာလျ ဖွဈရပါမယျ
ဥပမာပွောရရငျ အခြိုမုနျ့ ကွကျသားမှုနျ့ ဟငျးခကျြဆီ အရသာမှုနျ့ မြား
အထကျကပွောထားတဲ့ပစ်စညျးတှကေ အခွားပါဝငျပစ်စညျးမြား( တိရစ်ဆာနျအရိုးမြား / ဟလာ မလုပျထားတဲ့ ကွကျ / တိရစ်ဆာနျ အဆီမြားပါ တတျတာမို့လို့ حلال halal 清真 စတဲ့ ဟလာလျ တံဆိပျပါမှစားလို့ရလို့ပါ။
✅ ခကျြပွုတျတဲ့ပစ်စညျး သနျ့ရှငျးရပါမယျ
ဥပမာပွောရရငျ သကျသကျလှတျစား တဲ့ သူငယျခငျြး တဈယောကျရဲ့ ထမငျးခြိုငျ့ထဲကို အသားဟငျးနှိုကျထားတဲ့ဇှနျး နဲ့ ခပျမိလိုကျသလိုပေါ့။
ဟငျးအနှဈလေး ပသှေားတာ ဘာမှ မဖွဈပမေဲ့ သကျသကျလှတျစားတဲ့ သူငယျခငျြးကို အားနာစရာကွီး။
မရေဲ တို့ အစ်စလာမျဘာသာက အစားအသောကျနဲ့ ပတျသတျလာရငျ ဘာတှစေားရမယျ မစားရဘူး ဘယျလိုနညျး နဲ့ စားရမယျ ဆိုတဲ့ rules တှေ boundaries အရမျးမြားတယျ။ အဲ့နညျးတှေ အတိုငျးလဲ နထေိုငျကွတယျ။
အဲ့ နညျးတှေ စညျးတှေ ဘောငျတှရေဲ့ အကယျြတဝငျ့ ကို ဘာသာဝငျအခငျြးခငျြးကပဲ နားလညျ ပွီး လုပျဆောငျကွတာမို့လို့ ဘာသာဝငျအခငျြးခငျြး ရဲ့ ဆိုငျ တှေ မှာ ပဲ ဝယျကွစားကွတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
(Where I Eat Halal Food)
#goodfoodonly #youarewhatyoueat #halalknowledge
(၁) Halal means “denoting or relating to meat prepared as prescribed by Muslim law."
"မူစလငျ ဥပဒေ အရ သတျမှတျထားသညျ့ အသားမြားနှငျ့ စပျလဉျြး၍ ရညျညှနျးသညျ"
အစ်စလာမျတရားတျောနဲ့အညီ လညျလှီးထားသညျ့ သှေးမပါသော သနျ့ရှငျးလတျဆတျသော အစားအသောကျကို ဆိုလိုပါသညျ။
Halal= halalဆိုတာခှငျ့ပွုထားတဲ့အရာမှနျသမြှ ပွုပိုငျတယျလို့သတျမှတျတာပါ။
(၃) Halal အမှတျသားပါတဲ့အရာတိုငျးဟာ သနျ့ရှငျးစငျကွယျခွငျးလို့ အဓိပ်ပာယျရပါတယျ။ လညျလှီးတဲ့အရာတဈခုကို ပဲ halal လို့ချေါတာမဟုတျပါ ။ ရသေနျ့ဘူး မုနျ့ထုပျ အစရှိ သော ပစ်စညျးတှမှောလဲ halal အမှတျသား ပါတာတှရှေိပါတယျ။ လညျပငျးလှီးတဲ့အဓိက အကွောငျးရငျးကတော့ သှေးကဖွဈတဲ့ မသနျ့ရှငျးတဲ့ပိုးမြားခန်ဓာကိုယျထဲမရောကျအောငျ သှေးအားလုံးထုတျပဈလိုကျတာဖွဈပါတယျ။ နာကငျြမှုလဲအသကျသာဆုံးနညျးဖွဈပါတယျ။
(၄) အသား ရဲ့ အရောငျအဆငျး ပစ်စညျးရဲ့ ထုတျပိုးပုံ အရသာ ကို ကွညျ့ပွီး မွညျ့းပွီး ခှဲခွားလို့ လုံးဝ မရပါဘူးရှငျ။
အဲ့တာကွောငျ့မို့လို့ ဟာလာရောငျးတဲ့ ဆိုငျတှမှောပဲ ဝယျရခွငျးဖွဈပါတယျ။မသင်ျကာရငျမစားပါဘူး၊ ယုံကွညျမှစားပါတယျ ။​ဈေးထဲက ကွကျ​တှကေလဲ ဒိုငျ​တှဆေီက၀ယျလို့ ဒိုငျ​တှဘေယျလိုသတျလဲ မသိရပါဘူး ၊မသိခငျက စားပါတယျ။ မူစလငျဆိုငျဆိုပမေယျ့​နောကျပိုငျး အိမျလာငှား​နတေဲ့လူ​တှကေ​သူတို့ဘယျလိုသတျ​ကွောငျး၊ သူတို့မစား​ကွောငျး​ပွောပါက မစား​တော့ပါဘူး ။
[Zawgyi]အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မွတ်စလင်မ်တွေဟာ ဘာဖြစ်လို့ သူတို့ဘာသာဝင်အချင်းချင်းရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာပဲစားကြတာလဲ ??
(ကိုးကွယ်ရာဘာသာကွဲပြားတိုင်း ရန်သူမဟုတ်တဲ့ လူ့လောကကြီးမှာနေထိုင်ကြတာမို့ ကိုယ်လိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်တိုင်း အမြင်စောင်း စရာမလိုပါဘူး။ မျက်ကန်းမျိုးချစ်၊ မျက်ကန်းဘာသာချစ် မဖြစ်စေချင်ပါ။ မိမိမိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများထဲမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေပါ လို့ရှိရင် ကြားနေကြစကားလုံးလေးတစ်ခုရှိတယ် Halal အစားအသောက်တွေကိုသာ စားသောက်မှာပါ အခြားအစားအသောက်တွေကို ရှောင်ကြဉ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ယခုနောက်ပိုင်း Halal အစားအသောက်တွေဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ကိုက်ညီတယ်ဆိုကာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မဟုတ်သူများလည်း စားသောက်လာကြပါတယ်။ သည်တော့ ဗဟုသုတအနေနဲ့သိထားရအောင် Food Blooger ညီမလေး မေရဲ ရေးသားထားတာကိုပြန်ဝေငှလိုက်တယ်။)
မေရဲ တို့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ ဟာ အစားအသောက် နဲ့ ပတ်သတ်လာရင် halal ဟလာလ် ဖြစ်မှစားကြတာကို အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။
Halal ဟလာ ဆိုတာ ခွင့်ပြုထားသောအရာများ လို့ခေါ်ပါတယ်။ ရှည်ရှည်ဝေးဝေးတွေ ရှင်းပြမနေတော့ပါဘူး။
မေရဲက အစားအသောက် နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အကြံညဏ်ပေးသူဆိုတော့ အစားအသောက်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပဲ ရှင်းပြပါမယ်။
✅ လည်လှီးသား ဖြစ်မှ စားခွင့်ရှိပါတယ်
မေရဲတို့ ကိုးကွယ်တဲ့အရှင် ရဲ့ အမည် ကို ရွတ်ဆိုပြီး အစ္စလာမ်ရဲ့ ထုံးတမ်း နဲ့ အညီလည်လှီး သတ်ဖြတ် ထားတဲ့ သားကောင်ဖြစ်ရပါမယ်။
ကြက် ဘဲ ခို ငုံး ဆိတ် နွား ကုလားအုတ် ကျွဲ ဒါတွေအားလုံး ကို ဟာလာလုပ်ပြီးမှစားလို့ရပါတယ်။
( တစ်ချို့ ဆိုရင် ဝက်သား နဲ့ အရက် မစားတာတစ်ခုပဲ သိကြတော့ ကြက်သားဆိုဒီအတိုင်းစားလို့ရတယ် ထင်ကြပါတယ် တကယ် က လည်လှီး မှရတာ။ နောက် ခွေး ကြောင် သိန်းငှက် မိချောင်း ကြွက် ဖား အင်းဆက် စတာတွေကတော့ ဘာသာရေးအရ လုံးဝ စားလို့မရပါဘူး။ဘာသာရေးအရ စားပိုင်ခွင့်ရှိပေမဲ့ မျိုးတုန်းတော့မယ်လို့ ကြေညာထားရင်လဲ စားခွင့်မရှိပါဘူး)
တစ်ချို့ကြတော့လည်း လည်လှီးတယ် ဆိုတာ ဓါး နဲ့ တရုတ် သိုင်းကား ထဲ ကလို ဒုတ်ခနဲ့ လည်ပင်း ကိုခုတ်ချလိုက်တယ် ထင်ကြတယ်
ထက်နေအောင် သွေးထားတဲ့ ဓါး နဲ့ လည်ပင်း က လေပြွန် ၊သွေးပြန်ကြော၊ သွေးလွှတ်ကြော ကို ကြောရိုးမကြီးကို မထိပဲ လှီးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။
✅ ပါဝင်ပစ္စည်းများ halal ဟလာလ် ဖြစ်ရပါမယ်
ဥပမာပြောရရင် အချိုမုန့် ကြက်သားမှုန့် ဟင်းချက်ဆီ အရသာမှုန့် များ
အထက်ကပြောထားတဲ့ပစ္စည်းတွေက အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများ( တိရစ္ဆာန်အရိုးများ / ဟလာ မလုပ်ထားတဲ့ ကြက် / တိရစ္ဆာန် အဆီများပါ တတ်တာမို့လို့ حلال halal 清真 စတဲ့ ဟလာလ် တံဆိပ်ပါမှစားလို့ရလို့ပါ။
✅ ချက်ပြုတ်တဲ့ပစ္စည်း သန့်ရှင်းရပါမယ်
ဥပမာပြောရရင် သက်သက်လွတ်စား တဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ရဲ့ ထမင်းချိုင့်ထဲကို အသားဟင်းနှိုက်ထားတဲ့ဇွန်း နဲ့ ခပ်မိလိုက်သလိုပေါ့။
ဟင်းအနှစ်လေး ပေသွားတာ ဘာမှ မဖြစ်ပေမဲ့ သက်သက်လွတ်စားတဲ့ သူငယ်ချင်းကို အားနာစရာကြီး။
မေရဲ တို့ အစ္စလာမ်ဘာသာက အစားအသောက်နဲ့ ပတ်သတ်လာရင် ဘာတွေစားရမယ် မစားရဘူး ဘယ်လိုနည်း နဲ့ စားရမယ် ဆိုတဲ့ rules တွေ boundaries အရမ်းများတယ်။ အဲ့နည်းတွေ အတိုင်းလဲ နေထိုင်ကြတယ်။
အဲ့ နည်းတွေ စည်းတွေ ဘောင်တွေရဲ့ အကျယ်တဝင့် ကို ဘာသာဝင်အချင်းချင်းကပဲ နားလည် ပြီး လုပ်ဆောင်ကြတာမို့လို့ ဘာသာဝင်အချင်းချင်း ရဲ့ ဆိုင် တွေ မှာ ပဲ ဝယ်ကြစားကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
"မူစလင် ဥပဒေ အရ သတ်မှတ်ထားသည့် အသားများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရည်ညွှန်းသည်"
အစ္စလာမ်တရားတော်နဲ့အညီ လည်လှီးထားသည့် သွေးမပါသော သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သော အစားအသောက်ကို ဆိုလိုပါသည်။
Halal= halalဆိုတာခွင့်ပြုထားတဲ့အရာမှန်သမျှ ပြုပိုင်တယ်လို့သတ်မှတ်တာပါ။
(၃) Halal အမှတ်သားပါတဲ့အရာတိုင်းဟာ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းလို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ လည်လှီးတဲ့အရာတစ်ခုကို ပဲ halal လို့ခေါ်တာမဟုတ်ပါ ။ ရေသန့်ဘူး မုန့်ထုပ် အစရှိ သော ပစ္စည်းတွေမှာလဲ halal အမှတ်သား ပါတာတွေရှိပါတယ်။ လည်ပင်းလှီးတဲ့အဓိက အကြောင်းရင်းကတော့ သွေးကဖြစ်တဲ့ မသန့်ရှင်းတဲ့ပိုးများခန္ဓာကိုယ်ထဲမရောက်အောင် သွေးအားလုံးထုတ်ပစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ နာကျင်မှုလဲအသက်သာဆုံးနည်းဖြစ်ပါတယ်။
(၄) အသား ရဲ့ အရောင်အဆင်း ပစ္စည်းရဲ့ ထုတ်ပိုးပုံ အရသာ ကို ကြည့်ပြီး မြည့်းပြီး ခွဲခြားလို့ လုံးဝ မရပါဘူးရှင်။
အဲ့တာကြောင့်မို့လို့ ဟာလာရောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေမှာပဲ ဝယ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မသင်္ကာရင်မစားပါဘူး၊ ယုံကြည်မှစားပါတယ် ။​ဈေးထဲက ကြက်​တွေကလဲ ဒိုင်​တွေဆီက၀ယ်လို့ ဒိုင်​တွေဘယ်လိုသတ်လဲ မသိရပါဘူး ၊မသိခင်က စားပါတယ်။ မူစလင်ဆိုင်ဆိုပေမယ့်​နောက်ပိုင်း အိမ်လာငှား​နေတဲ့လူ​တွေက​သူတို့ဘယ်လိုသတ်​ကြောင်း၊ သူတို့မစား​ကြောင်း​ပြောပါက မစား​တော့ပါဘူး ။
Labels: Food & Drinks, ဗဟုသုတ, ဘာသာရေးဆောင်းပါး
အစ်စလာမျဘာသာဝငျ မှတျစလငျမျတှဟော ဘာဖွဈလို့ သူတို့ဘ...
ဆေးဘဲဥအကွှပျကွျော - အာလူးထမငျးထောငျး - ငါးခေါငျးခြ...
“ရှမျး” ဝေါဟာရ ရှငျးလငျးခကျြ